(Baby Bright 1)
Body Mist 20ml - Sweet Citrus BUY 1 GET 1
အိတ်ဆောင်ရေမွှေးဘူးလေးဖြစ်လို့ ဘယ်ကို သွားသွား အလွယ်တကူ အိတ်ထဲ ထည့်ဆောင်သွားရုံနဲ့ ဘယ်နေရာပဲ သွားသွား ကိုယ့်ကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ Body Mist လေးပါ ။အသီးရနံ့လေးတွေဖြစ်လို့ အနံ့ အရမ်းပြင်းတာ..
MM Mineral Matte Lip Paint
MM Matte ရဲ့ အဓိက အားသာချက်ကတော့ အရောင်ထွက်မှန်ကန်ခြင်း၊နှုတ်ခမ်းနီ အခဲလေးဖြစ်တာကြောင့် ဆိုးရတာ လွယ်ကူခြင်း၊နှုတ်ခမ်းသားညိုသူလေးတွေက အစ သုံးလို့ရတယ်၊နှုတ်ခမ်းသားပေါင်းဆေး ပါဝင်သောကြောင့် နှုတ်ခမ်းသား ..
Plankton Matte Cushion Lip & Moist Tint
Matte tint for adding shine and fresh look to your lips and cheeks.The soft matte texture is easy to blend, does not fall into lip lines or dry out your lips and is suitable for all skin types.It is c..
Red Wine Cover Pact 2Pcs
Red Wine Cover Pact speed white, soft and smooth texture to advance concealed, smooth skin and concealed all wrinkles…Whitening and radiant skin along with protect your skin from UVA & UVB rays wi..
Shower Cream 750ml - Salmon White 2Pcs
Baby Bright မှ ထုတ်လုပ်သော Salmon White Shower Cream 750ml သည် ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ထားသော ရေချိုးဆပ်ပြာ cream တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Salmon ငါးဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး အသားအရေကို တင်းတင်းရင်းရင..
Shower Lotion 750ml - Glutathione & Vit C 2pcs
A special soft skin lotion lotion + radiant skin, you can enjoy the lotion along with it. Withabath in2in 1 rich in goat milk. Skin deep in the skin. Restore dry skin..
Shower Lotion 750ml - Goat Milk & Collagen 2pcs
Summer Lip & Cheek Matte Tint 2Pcs
Watermelon & Tomato Matte BB Cream 30g
Watermelon & Tomato BB cream comes withacombination of SPF 45 PA++ and features layerable technology that allows you to build up the layers without clogging pores.In addition, it helps control o..